Warshad Xidhmada COVID-19 - Shiinaha COVID-19 Soosaarayaasha Kit Kit, Alaab-qeybiyeyaal
COVID-19 (Corona Virus Disease) waa cudur faafa oo uu sababo coronavirus-kii ugu dambeeyay ee la helay.COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG / IgM Antibody Test Cassette waa tallaal chromatographic immunoassay oo dhinaca dambe ah oo loogu talagalay ogaanshaha tayada IgG iyo IgM unugyada difaaca jirka ee COVID-19 ee ku jira dhiigga oo dhan, shaybaarka ama tijaabada dhiigga.
COVID-19 (SARS-CoV-2) Tijaabada Antigen
Badeecadani waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado fitamiinada tayada leh ee antigen-ka cusub ee coronavirus-ka ee qanjirada nasopharyngeal bini-aadamka.
COVID-19 (SARS-CoV-2) Qalabka loo yaqaan 'Antigen Rapid Test Kit' waa tijaabo waxayna bixisaa natiijo tijaabo ah oo hordhac ah si looga caawiyo baaritaanka cudurka infekshanka cusub ee Coronavirus. Fasiraad kasta ama adeegsiga natiijadan tijaabada ah ee hordhaca ah waa inay sidoo kale ku tiirsanaato natiijooyinka kale ee caafimaad iyo sidoo kale xukunka xirfadeed ee bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka. Hababka (yada) kale ee imtixaanka waa in loo tixgeliyaa si loo xaqiijiyo natiijada baaritaanka ee baaritaankaan laga helay.